Obere azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa | Martech Zone
Wenezde, August 22, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ndị na-akwado teknụzụ anyị,Mpempe akwụkwọ (maka formlọ ụlọ n'ịntanetị), wuru karịa ịrịba infographic enye nduzi na azum na ngwaọrụ na obere azụmahịa nwere ike leverage. Ngwaọrụ ọ bụla bara uru ma dịkwa mfe iji.
Zụlite usoro ịzụ ahịa nwere ike isi ike. Luckily, na Ngwaọrụ nke usoro azụmaahịa obere azụmaahịa enyere gị aka ịhazi usoro ahụ, oge niile ị na-enye ngwaọrụ ndị ewu ewu ga-enye gị ohere ị nweta ma jikwaa ndị ahịa gị. Soro ntuziaka n'okpuru maka nkọwa ndị ọzọ!
Tags: mmepe azụmahịaaka ndi ahianjikwa ndị ahịampempe akwụkwọinbound marketingndu ndun'ire